Mpanamboatra metatra Smart - China Mpamatsy metatra Smart, Factory
Mira-tariby telo-dingana / telo-dingana telo-tariby telo metatra fehezin'ny sisintany miampy lehibe ary mampiasa boribory fandrefesana angovo avo lenta. Ny fahaizan'ny serivisy mifehy sy ny fahatokisana azy dia nahatratra ny fampiharana be dia be ihany koa. Mampifanaraka ny teknolojia fanodinana sampana nomerika sy ny fizotran'ny SMT, ary namboarina sy novokarina araka ny fanjifana herin'ireo mpampiasa indostrialy.
Mamatsy herinaratra herinaratra herinaratra tokana dia vokatra fandrefesana angovo vaovao novokarinay ary novokarinay ny orinasanay araka ny fanondroana ara-teknika ny GB / T17215.321-2008. Ity vokatra ity dia mampiasa lalam-pifandraisana midadasika sy teknika SMT, miaraka amin'ireo fiasa toy ny fandrefesana angovo elektrika, fanodinana angon-drakitra, fanaraha-maso tena misy, ary fifaneraserana vaovao.
Mira-tariby telo-dingana / telo-dingana telo-tariby telo metatra ny tamba-jotra lehibe miampy dingana lehibe, mampiasa teknolojia teknolojia fanodinana sampana sy fizotry ny SMT, novolavolaina ary novolavolaina araka ny tena fanjifana ireo mpampiasa indostrialy. Izy io dia mahafeno ny takian'ny GB / T 17215.301-2007 ， DL / T 614-2007 ary DL / T645-2007 .Ny fepetra takiana dia azo namboarina arakaraka ny filàn'ny fiasa.